Izindaba - Ungasisebenzisa kanjani kahle i-Glass Electronic Weight Scale CW27
Ungasisebenzisa kanjani ngendlela efanele i-Glass Electronic Weight Scale CW275
Isikali se-Glass Electronic Isikali CW275Isikali sesisindo sokunemba okuphezulu nezinzwa eziyi-4 ezizwela kakhulu, ezingalinganisa isisindo sakho ngokunembe kakhudlwana, kepha kufanele unake ukusisebenzisa kahle, ngaphandle kwalokho, isisindo sizokwenzelela futhi sithinte isilinganiso. Ngakho-ke ungasisebenzisa kanjani i-Glass Electronic Weight Scale CW275 ukukala isisindo kahle?
1. Okokuqala, isikali sesisindo kufanele sibekwe phansi okuyisicaba, hhayi kukhaphethi noma emhlabathini othambile, hhayi endaweni enokungalingani okuphezulu noma okuphansi, futhi hhayi endlini yokugezela enomswakama, ngoba umkhiqizo we-elekthronikhi.
2.Isikhathi sokukala nokuma kumele sibe siqondile. Hlukanisa izinyawo zombili ngaphandle kokuvimba isibonisi. Ukuma ngobumnene ngonyawo olulodwa, nangokuzinza ngolunye unyawo. Unganyakazisi noma ugxume esikalini. Musa ukugqoka izicathulo, bese uzama ukukala ngezingubo ezimbalwa ngangokunokwenzeka ukuze usondele esisindweni sakho.
3. Ngemuva kokuma, isibuko sizonikeza ukufundwa, futhi sizonikeza okunye ukufunda ngemuva kokukhanya kabili, okuyisisindo sakho. Bese wehla futhi bese ulinganisa futhi, uma idatha iyefana neyangaphambili, isisindo sakho sangempela.
4. Kukhona izinyawo ezine ikakhulukazi ngemuva kwesikali sokubeka phansi. Le yingxenye eyinhloko yesisindo, ithuluzi lokulinganisa entwasahlobo. Lezi zinyawo ezine kufanele zisebenze ngasikhathi sinye ukuze zikalwe ngokunembile.
5. Maphakathi kwezinyawo ezine, kukhona igumbi lebhethri, elisetshenziselwa ukufaka ibhethri elisebenzayo lesikali sesisindo futhi ibhethri kufanele lishintshwe ngesikhathi. Lapho ibhethri liphelelwe ngamandla, inani lesisindo elilinganisiwe ngeke linembe. Uma ibhethri isetshenziswe isikhathi eside, izovuza uketshezi futhi ilimaze isekethe. Ngakho-ke ngicela ushintshe ibhethri ngesikhathi.
6.Naka umkhawulo wokulinganisa wesilinganiso sesisindo. Umkhawulo walesi isisindo ungama-180 kilogram. Ungalinganisi ngaphezu kobubanzi. Ngaphandle kwalokho, ngeke ukwazi ukukala isisindo sakho, futhi ungalahlekelwa isisindo sakho. Ngakho-ke uma uyithenga, kufanele ubheke ibanga lokukala elikufanelayo.
Kuyadingeka ukuthuthukisa imikhuba yakho nsuku zonke, futhi ube nesisindo ngesikhathi esinqunyiwe, bese wenza amarekhodi ahambisanayo.
Ngokubukwa kwesikhathi eside, ungathatha isisindo esimaphakathi seviki elilodwa noma isigamu senyanga ukuqhathanisa, ngoba izinguquko usuku ngalunye zincane kakhulu.
Langaphambilini Amanani Amanani Aphansi Okutshalwa Kwezimali Ehhotela Esiwumbhadane Akakafiki
Olandelayo: Ungayikhetha Kanjani Igedlela Likagesi?